Xaaladda Dhaqaale ee Dalka Giriiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
George papandreou, ra'iisal wasaaraha dalka Giriiga. Sawile: Kostase Tsironis/scanpix
Xaaladda Dhaqaale ee Dalka Giriiga
La cusbooneeyay måndag 7 november 2011 kl 16.40
La daabacay måndag 7 november 2011 kl 15.06
Faalooyinkii ugu horreeyey ee dalkani ka faalloodo lana xiriira xaaladda hogaamiyaha dalka Giriigga Giorgios Papandreou uu masuuliyadda kaga degayo ayaa ah kuwo taxadar leh.
Kullammadii sabtidii iyo axaddii ee masuuliyiinta dalkaasi ayay ku caddaatay in labada xisbi ee dalka ugu waaweyni dhisi doonaan dawlad loo dhan yahay, iyadoona aannu hoggaanka dawladdaa aannu hor-boodi doonin George Papandareou.
Howlaha ay dawladda loo dhan yahay qaban doonto ayay ugu weyn tahay sidii loo hir-gelin lahaa heshiiskii badbaadinta dhaqaale ee dalka Giriiggu la galay waddammada EU-da iyo hayadda lacagta ee IMF. Iyadoona ay dalkaasi ka dhici doonto doorasho 19-ka bisha feeberaayo ee sannadka foodda innagu soo haya, sida ey go’aanka ku gaareen labada xisbi ee ugu waaweyn.
Xisbiga ugu weyn xisbiyada mucaaradka ayaa shuruud ka dhigay si uu dawladda uga qayb qaato in marka hore uu Papandareou hoggaanka isaga dego. Gelinka dambe ee maanta ayeyna magaalada Brugsell ee caasimadda dalka Beljimka kulan ku yeelan doonaan wasiirrada dhaqaalaha ee waddammada ku midoobey ururka lacagta Euro-oga si ey uga xaajoodaan in tallaabooyinka siyaasadeed ee dalkaasi ku tallaabsady ey ku filan yihiin iyo in kale sidii loo bixin lahaa taageerada deymaha dhaqaale middan xigta sidii horeba loogu heshiiyey.
Madaxa laanta saadaalinta ee bangiga SEB Robert Bergqvist, ayaa yiri mar uu idaacadda P1 morgon u warramayay sidan:
- Waa mid dalka Giriigga iyo dhammaan waddammada ku bahoobey ururka lacagta ee Euro-oguba u baahan yihiin xaalad dhaqaale ee deggenaansho. Si haddaba ey waddammada Yurub gacan uga geeystaan xaaladda dhaqaale ee cakiran ee dalka Giriigga, waa in dalkaasi ka soo baxaa waajibaadka saaran iyo heshiisyada la wada-galay. Maadaama ay dalkaa khasnaddiisu dhowaan maran doonto waa mid loo baahan yahay in la helo xaalad siyaasadeed ee deggen.
Inkasta oo heeshiis loo wada dhan yahay lagu gaaray sidii dawlad loo dhan yahay loo dhisi lahaa ayey haddana dadyow badan ee iswiidhish ahi ku tilmaameen mid aan ku fileeyn sidii deggenaansho loo gaari lahaa. Johan Norberg waa qoraa ka mid ah dadyowga liberaalka ee faalooda, wuxuuna sheegey mar uu xalay u warramayay idaacadda la iska daawado ee SVT laanteeda Agenda:
- Waxay ila tahay inay adag tahay sidii sidii dib loogu soo rogi lahaa xaaladdan dhaqaale ee cakiran. Xitaa tallaabadan deeymaha loogu cafiyey ayay iila muuqataa in dalka Giriiggu toban sannadood dabadeed uu soo gaari doono heerka xaaladda dhaqaale ee maanta uu dalka Talyaanigu ku sugan yahay. Dawladda Talyaaniga ayuu dhaqaalihiisu ku sugan yahay deeymo lagu leeyahay ee gaarsiisan 120% ee miisaaniyadda dalkaasi, waana culeeys uu dalkaasi la gurguuranayo maanta.
Halka uu madaxa laanta saadaalinta ee bangiga SEB sheegey mar uu u warramayay idaacadda P1 morgon in kulanka wasiirrada dhaqaalaha ee euro-ogu ee magaalada Brugsel ku garab-geli doonaan dalka Giriigga taageerada dhaqaale ee uu u baahan yahay.
- Waxay iila muuqataa in falkaa ey ku dhaqaai doonaan. Aan bal ka war-sugno halka xaaladda siyaasadeed ee dalka Giriiggu maanta ay caga-dhigato. Waddammada EU-duna wey ku qasban yihiin iney taageero dhaqaale dalkaa u fidiyaan waayo xaaladda ayaa kas ii dari doonta haddii aaney middaa ku tallaabsan, sida uu sheegay Robert Bergqvist, madaxa laanta saadaalinta ee bangiga SEB.
Isha: ekot, p1 morgon, SVT